January 29, 2021 - ApannPyay Media
နားအူ နားကိုက်ခြင်းတို့အတွက် ဖလံ တောင်ဝှေး
January 30, 2021 January 29, 2021 by ApannPyay Media
နားအူ ၊ နားကိုက်ခြင်းတို့အတွက် ဖလံ တောင်ဝှေး နားကိုက်၊နားအူ၊ နာပြည်ယို ၊နားရောင်၊နားယားခြင်းတို့အတွက် ဖလန်တောင်ဝှေးကိုအခွံနွာ မီးကင်အတန်ကြာအအေးခံ ပြီး အရည်ညစ်ယူလိုက်ပါ ၎င်း အရည်ကိုနားထဲ ၃/၄စက် မကြာမကြာထည့်ပေးပါကသက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည် ကင်းပုံရွက် သတ္တုရည်ကို နှမ်းဆီ (သို့) ရေနှင့် ဖျော်၍ နားတွင်း ခတ်ပါက နားကိုက် ရောဂါကို ပျောက်ကင်း စေနိုင်သည် ဒန့်သလွန်အစေ့…မှုန့်ကို နားနာ၊ နားကိုက်၊ နားပြည်ယိုရောဂါများအတွက် အုန်းဆီနှင့်ရောစပ်ပြီး ကြက်တောင်သန့်သန့်ဖြင့် နားကျပ်ပေးပါက အထက်ပါရောဂါများကို ပျောက်ကင်းသက်သာစေပါတယ်။ နားအူ၊ နားကိုက်၊ နားပြည်ယို ပင်စိမ်းရွက် သတ္ထုရည်ကို ဇွန်းဖြင့် ထည့်၍ မီးဖြင့်အပူပေးပါ။ ပင်စိမ်းရွက်သတ္ထုရည် နွေးနွေး နှစ်စက် သုံးစက်ခန့် ထည့်ပါ။ ရှားစောင်းလက်ပပ်၏ အတွင်းအသားကို အရည်ညစ်ယူပါ။ မီးခပ်ပြင်းပြင်းဖြင့် ပြုတ်ပါ။ … Read more
သူမသည် အပျိုစစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်း မမဆောင်း ဗီဒီယိုဖိုင် ဒဲ့ချပြရှင်းပြီ
January 29, 2021 by ApannPyay Media
သူမသည် အပျိုစစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်း မမဆောင်း ဗီဒီယိုဖိုင် ဒဲ့ချပြရှင်းပြီ ဗီဒီယို ဇာတ်ကား တွေ နဲ့ VCD အခွေ များ တွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့ရာမှ တဆင့် ပရိသတ် တွေ ရဲ့ အသိအမှတ် ပြု လက်ခံ အားပေး မှု တွေကို ရရှိခဲ့ သူက တော့ သ ရုပ် ဆောင် မင်းသမီး ချောလေး ဆောင်းအိန္ဒြေထွန်း ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … ။ သူမ ဟာ အနုပညာ လောက တွင် ဆယ်စု နှစ် နှစ်စုတိုင် အောင်ကို လူ အများရဲ့ ချစ်ခင် မှုတွေ ရရှိခဲ့တာ … Read more
လေးဖက်နာရောဂါအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သဘာဝဆေးနည်း မြန်မာပြည်မှာ အဖြစ်အများဆုံး လေးဖက်နာရောဂါ အတွက်ပါ တဆင့်မျှဝေပေးကြပါ ။ လေးဘက်နာအတွက် သဘာဝဆေးကောင်းတစ်လက် လေးဘက်နာ၊ အဆစ်မြစ်နာနှင့် အကြောရောဂါဝေဒနာများအတွက် သဘာဝဆေးနည်းကောင်းလေးကို ကျန်းမာရေးသတင်းများမှ မျှဝေပေးလိုက်တယ်။ ဆေးနည်း- (၁) ရှောက်သီးတစ်ခြမ်းကို ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခန့်ရအောင် အရည်ညစ်ယူပါ။ (၂) ချင်း(ဂျင်းတက်)ကို ထုထောင်း၍ လက်ဖက်စားဇွန်း တစ်ဇွန်းခန့်ရအောင် အရည်ညစ်ယူပါ။ (၃) သဘာ၀ပျားရည်စစ်စစ် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခန့် ထည့်ပါ။ (၄) ၄င်း ၃ မျိုးကို ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ထဲတွင် အတူရောမွှေ၍ ရေနွေးချမ်းနှင့်သော်၄င်း၊ ရေအေးနှင့်သော်၄င်း မနက်၊ နေ့၊ ည တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်သောက်ပါ။ ပျားရည်ကို သဘာ၀ပျားရည်၊ ရှောက်သီးကို ရှောက်ခါးသီး(တောရှောက်သီး) ဆိုလျှင် ပိုကောင်းပါသည်။ ၄င်းသဘာဝဆေးကို ပုံမှန်သောက်သုံးပေးပါက အဆစ်အမြစ်နာဖြစ်ခြင်း၊ … Read more
ဆက်တိုက်ဆိုးနေတဲ့ ချောင်းအတွက် ငရုပ်ကောင်း ၅စေ့
ဆက်တိုက်ဆိုးနေတဲ့ ချောင်းအတွက် ငရုပ်ကောင်း ၅စေ့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုးနေတဲ့ချောင်းလက်တွေ့ပျောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာ့ဆေးနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ငရုတ်ကောင်းနဲ့ပျားရည်တော့သာ ရှိဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးစွာငရုတ်ကောင်းငါးစေ့ ခြောက်စေ့လောက်ကိုအမှုန့်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်၎င်းအမှုန်​့နဲ့ပျားရည်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းစာလောက်ရောသမမွှေပြီးလျှက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအနေနဲ့ကျနော်ပြောချင်တာက ဆေးလျှက်ပြီးနာရီဝက်အတွင်းရေလုံးဝမသောက်ရပါဘူး။ သိပ်မကြာခင်အချိန်လေးမှာပဲနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုးနေရတဲ့ချောင်းယူပစ်သလိုပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ HTYTဇီဝက ဆက္တိုက္ဆိုးေနတဲ့ ေခ်ာင္းအတြက္ င႐ုပ္ေကာင္း ၅ေစ့ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးေန႔စဥ္ရက္ဆက္ဆိုးေနတဲ့ေခ်ာင္းလက္ေတြ႕ေပ်ာက္ခဲ့တဲ့ျမန္မာ့ေဆးနည္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ င႐ုတ္ေကာင္းနဲ႔ပ်ားရည္ေတာ့သာ ရွိဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ပထမဦးစြာင႐ုတ္ေကာင္းငါးေစ့ ေျခာက္ေစ့ေလာက္ကိုအမႈန႔္ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္၎အမႈန္​့နဲ႔ပ်ားရည္လက္ဖက္ရည္ဇြန္းတစ္ဇြန္းစာေလာက္ေရာသမေမႊၿပီးလၽွက္ေပးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအေနနဲ႔က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက ေဆးလၽွက္ၿပီးနာရီဝက္အတြင္းေရလုံးဝမေသာက္ရပါဘူး။ သိပ္မၾကာခင္အခ်ိန္ေလးမွာပဲေန႔စဥ္ရက္ဆက္ဆိုးေနရတဲ့ေခ်ာင္းယူပစ္သလိုေပ်ာက္ကင္းသြားပါလိမ့္မယ္။ HTYTဇီဝက
လမ်းဘေးမှာ ဖျားနာပီး အသက်ရှုကျပ်နေတဲ့ ခလေးတစ်ယောက်တွေ့လို့ မေးကြည့်လိုက်သောအခါ…
လမ်းဘေးမှာ ဖျားနာပီး အသက်ရှုကျပ်နေတဲ့ ခလေးတစ်ယောက်တွေ့လို့ မေးကြည့်လိုက်သောအခါ… ဒီနေ့ကလေးလေးတစ်ယောက် 84လမ်း41ဒေါင့်နားမှာ သရက်ကင်ဗန်းလေးကိုင်p တစ်ဖက်ကရင်ဘတ်လေးဖိလိုက်ဆိုင်ကယ်တွေကိုလိုက်တားလိုက်လုပ်နေတယ် မျက်နှာလှမ်းကြည့်တော့လဲ မျက်နှာကမကောင်းဘူး တစ်ယောက်မှလဲဆိုငိကယ်ကိုရပ်မပေးကြဘူး သူ့ကြည့်ပြီးသနားလာတာနဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုသူ့ဘေးနားထိုးရပ်ပြီး ကလေး ဘာဖြစ်လို့လဲ ​နေမကောင်းဘူးလား မေးတော့ သူအသက်ရှုတွေကြပ်တယ်တဲ့ အသက်ရှုမဝဘူးတဲ့ မောနေရှာတယ် ချွေးတွေလဲပြန်လို့ သူ့ကိုလမ်းဘေးနေရိပ်တဲ့နေရာခနထိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီး ဘာလုပ်ပေးရမလဲမေးတော့ အာဖျန်းဆေး လိုချင်တယ်တဲ့😢 သူ့သုံးနေကျဟာလေးက အိမ်မှာမေ့ကျန်နေခဲ့တာတဲ့ သူ့ပိုက်ဆံလေးကြည့်တော့လဲအကြွေလေးတွေပဲရှိရှာတယ် ဗန်းထဲမှာလဲ သရက်ကင်တွေအများကြီးကျန်သေးတယ် ကျွန်တောိလဲသနားပြီး ကလေးဆေးနာမည်သိလားလို့မေးတော့ သူသိတယ်တဲ့ အဲ့တာဆို လာဆိုငိကယ်ပေါ်တတ် သွားဝယ်မယ်ဆိုp ဆေးဆိုင်မှာ သူ့အတွက်အာဖျန်းဆေး လိုက်ဝယ်ပေးလိုက်တယ် လက်ထဲလဲ6ထောင်ပဲပါခဲ့တာ ဆေးက4500 ပေးရလို့တော်သေးတယ် သူအဲ့ဆေးလေးသုံးလိုက်တော့ အရမ်းမသက်သာပေမယ့် ခုနကလောက်မဆိုးတော့ဘူး သူ့အကြောင်းနည်းနည်းမေးကြည့်တော့ သူ့အသက်က၁၂နှစိပဲရှိသေးတယ် 6တန်းတက်နေတာ အဖေမရှိတော့ဘူးတဲ့ အမေတော့ရှိတယ်တဲ့ အမတစ်ယောက်လဲရှိတယ်ပြောတယ် အမကလဲအိမ်ထောင်ကျသွားတော့ ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အဆင်မပြေဘူး သူ့အမေကလဲသူများတွေကိုလိုက်နှိပ်ပေးရတာတဲ့မိသားစုက ​အဆင်မပြေဘူးတဲ့ … Read more
အောင်လအန်ဆန်းနှင့် ဘစ်ဒက်ရှ်တို့ လာမည့် ဧပြီလ ၂၁ ရက်တွင် ပြန်ထိုးသတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း One Chapionship ၏လူမှုကွန်ရက်တွင် ထုတ်ပြန်
အောင်လအန်ဆန်းနှင့် ဘစ်ဒက်ရှ်တို့ လာမည့် ဧပြီလ ၂၁ ရက်တွင် ပြန်ထိုးသတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း One Chapionship ၏လူမှုကွန်ရက်တွင် ထုတ်ပြန် ချန်ပီယံအောင်လအန်ဆန်နှင့် ရုရှားနိုင်ငံသား ဗစ်တာလီဘစ်ဒက်ရှ်တို့ လာမည့် ဧပြီလ ၂၁ ရက်တွင် တတိယ One Chapionship က ယင်း၏လူမှုကွန်ရက်တွင် “HUGE NEWS “ONE on TNT” kicks off on April7with four weeks of STACKED events featuring Adriano Moraes vs. “Mighty Mouse” Johnson ၊ Eddie Alvarez vs. Iuri Lapicus ၊ Christian Lee … Read more
ရောဂါမျိုးစုံကို အမြစ်ဖြုတ်နိုင်တဲ့ ဆီမီးတောက်ပင်လေးကို တောင်းဆိုချက်အရ တင်ပေးလိုက်ပြီနော်
ရောဂါမျိုးစုံကို အမြစ်ဖြုတ်နိုင်တဲ့ ဆီမီးတောက်ပင်လေးကို တောင်းဆိုချက်အရ တင်ပေးလိုက်ပြီနော် ဆီမီးတောက်ပင်လေးကို တောင်းဆိုချက်အရ တင်ပေးလိုက်ပါပီနော်။ မိတ်ဆွေတို့လည်းဘယ်အပင်သိချင်ကြလဲ comment မှာမန့်ခဲ့ပေးနော်။ လက်လှမ်းမှီသလောက်မျှဝေပေးဖို့အသင့်ပါ။ သတိပြုရန် ဆီမီးတောက်ဥသည်အဆိပ်အုပ်စုဝင်ဆေးပစ္စည်းဖြစ်သဖြင့်ဆီမီးတောက်ဥကိုမီးသင်း၍လည်းကောင်းသုဒ္ဓပြုသန့်စင်၍လည်းကောင်း၊အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဆီမီးတောက်ပါဝင်သောမည်သည့်ဆေးဝါးမဆိုသောက်သုံးမည်ဆိုပါကတတ်ကျွမ်းနားလည်သောတိုင်းရင်းဆေးသမားတော်များ၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသုံးစွဲရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသည့်အစိတ်အပိုင်း- အရွက်၊အမြစ်၊ဥကိုအသုံးပြုသည်။အသုံးပြုပုံ…. ဆီမီးတောက်ဥတစ်မတ်သားကိုအမှုန့်ထောင်း၍ရေကော်ဖီပန်းကန်လုံးသုံးလုံးထည့်၍နာရီဝက်ခန့်ကျိုချက်ပြီးစစ်၍သောက်ပါကအဆစ်ရောင်ခြင်း၊ကိုက်ခြင်း၊စသောရောဂါများကိုသက်သာ ပျောက်ကင်းစေ၏။ဆီမီးတောက်ဥအရွက်သုံးကျပ်သားနှင်ကြောင်ပန်းရွက်သုံးကျပ်သားသတ္တုရည်ကိုညှစ်၍ချက်၍ရသောဆီက ိုရှုပေးလျှင်အသက်ရှုမဝသောရောဂါ၊လေပြွန်ရောင်သောရောဂါများသက်သာစေတတ်သည်။၎င်းအရွက်မှုန့်တစ်ကျပ်သားကိုထန်းလျက်တစ်ကျပ်သားနှင့်ရော ကျွေးလျှင်ဝမ်းတွင်းရှိတုတ်ပိုးသန်ပိုးများကျဆင်းစေသည်။ ၎င်းအရွက်အမှုန့်ကိုအနာ၌ဖြူးပေးလျှင်အနာတွင်ရှိသောပိုးများသေ၍အနာသည်ပျောက်ကင်း၏။အရွက်ကိုထောင်း၍အုံပေးပါကသက်သာ ပျောက်ကင်းစေသည်။၎င်းအရွက်သတ္တုရည်တစ်ကျပ်သား၊နှမ်းဆီတစ်ကျပ်သား၊အုန်းဆီ တစ်ကျပ်သားရောတဝက်ခန်းအောင်ချက်၍နားတွင်ကြပ်ပေးခြင်း ၊ထည့်ပေးခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သော်နားကိုက်၊နားနာပျောက်ကင်း၍နားတွင်းရှိပိုးများလည်းကျဆင်းလာပါလိမ့်မည်။ဆီမီးတောက်ဥကိုမီးကင်၍နံ့သာဖြူရောစပ်လိမ်းကျံပေးပါကခန္ဓာကိုယ်၏အပြင်ဘက်တစ်စုံတစ်နေရာတွင်ရောင်ရမ်းသောရောဂါသက်သာပျောက်ကင်းစေ၏။ ပါဝင်သောဓာတုဒြပ်ပေါင်းများColchicine,cornigerine,Bု -amyrin,Bု-sitosterol,luteolin,bechuanine,colchicamide,colchicoside. ပုံပြဆေးအဘိဓာန်မှဆီမီးတောက်အကြောင်းပုံသဏ္ဌာန်၎င်းသည်နွယ်ပင်မျိုးဖြစ်၏။အရွက်(၄)လက်မခန့်ရှိ၍အဖျားချွန်၏။မီးတောက်၊မီးစွယ်၊မီးညွန့်နှင့်သဏ္ဌာန်တူ၏။ပွင့်ဖတ်(၆)ခုရှိ၏။အပွင့်မှာအနီရောင်နှင့်အဝါရောင်ရောနှောနေ၏။ အဖို၊အမနှစ်မျိုးရှိရာအမဥသည်လုံး၍အဖိုဥသည်ရှည်၏။များသောအားဖြင့်ဥကိုသုံးကြ၏။သက္ကတဘာသာ၌လင်္ဂလီ၏အဓိပ္ပာယ်မှာ“ထွန်´´ကိုခေါ်၏။ဤအကြောင်းမှာဆီမီးတောက်ပင်၏ဥမှာထွန်သဏ္ဌာန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ထို့ကြောင့်ဆီမီးတောက်ဥကို`လင်္ဂလီ´ဟူသောအမည်ဖြင့်ခေါ်ဝေါ်ကြ၏။ထိုဥသည်လည်းလွယ်ကူစွာမသွား၊သို့ရာတွင်ထိုဥသည်မြေကြီး၌ထွန်ကဲ့သို့ကောက်တကွေ့သွား၏။ဆီမီးတောက်ဥသည်ဖြူသောအဆင်းရှိ၏။နူးညံ့၏။ခါးသောအရသာရှိ၏။အပင်၏အဖျားတွင်လက်(၅)သစ်၊(၆)သစ်ရှည်၍ကျယ်ပြန့်သောအပွင့်တို့သည်ထွက်ကုန််၏။ထိုအပွင့်တို့သည်ရင့်သည်ကိုလိုက်၍အစိမ်း၊အဝါအနီတို့ဖြစ်ကုန်၏။ထိုနီသောအပွင့်ကိုအကြောင်းပြု၍`ဆီမီးတောက်´ကို`ဝဟနိသိခါ´ဟု ခေါ်၏။အရသာနှင့်အကျိုးသွား – ဖန််၏။ခါး၏။စပ်၏။ပူ၏။ဝိပါက၌စပ်၏။ ဂုဏ်နှင့်စွမ်းရည် ကြေကျက်လွယ်၏။ထက်မြက်၏။သည်းခြေကိုဖြစ်စေ၏။လေသလိပ်ကိုနိုင်၏။ဆီးကိုရွှင်စေ၏။၎င်းပြင်အနာပေါက်၊ပိုးရောဂါ၊ဆီးအိမ်နာကျင််ကိုက်ခဲခြင်း၊အဆိပ်၊နူနာ၊မြင်းသရိုက်၊ဖောရောင်၊မြစ်ခြောက်၊ထိုးအောင့်ခြင်းတို့၌အကျိုးပြု၏။သို့သော်ကိုယ်ဝန်ကိုပျက်ပြားစေ၏။ ရောဂါအလိုက်အသုံးပြုနည်း ပြည်တုလာသရောရောဂါ ဆီမီးတောက်ဥကိုအမှုန့်ထောင်း၍ရေနှင့်စိမ်ပြီးစပ်၍သောက်ပါကပြည်တုလာသရောရောဂါပျောက်ကင်း၏။ က်ပ္တီးနာ ဆီမီးတောက်အရွက်နှင့်ကြောင်ပန်းရွက်သတ္တုရည်ကိုချက်၍ရသောဆီကိုရှုပေးလျှင်ကျပ်တီးနာပျောက်ကင်း၏။ ပိုးရောဂါ ၎င်းအရွက်အမှုန့်ကိုထန်းလျှက်နှင့်ရောကျွေးလျှင်ဝမ်းတွင်းရှိတုတ်ပိုး၊သံပိုးများကျဆင်း၍ဝမ်းတွင်းရှိပိုးရောဂါများမှပျောက်ကင်း၏။ ကိုယ်ရေဝါ ၎င်းအရွက်၏အမှုန့်ကိုဒိန်ချဉ်ရည်နှင့်ရော၍သောက်ပါက၎င်းရောဂါမှ ပျောက်ကင်း၏။ အနာပေါက် ၎င်းအရွက်၏အမှုန့်ကိုအနာ၌ဖြူးပေးလျှင်အနာတွင်ရှိသောပိုးများသေ၍အနာသည်ပျောက်ကင်း၏။ နားရောဂါ ၎င်းအရွက်မှုန့်ကိုသံပုရာရည်နှင့်နားတွင်ကျပ်ပေးခြင်း၊ထည့်ပေးခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သော်နားကိုက်၊နားနာပျောက်ကင်း၍နားတွင်းရှိပိုးများလည်းကျဆင်းလာပါလိမ့်မည်။ ဥမ္မန္တရောဂါ နားပေါက်၌သလိပ်၊လေဖောက်ပြန်၍ရောင်တင်းသောဥမ္မန္တရောဂါ၌ဖွတ်ဆီ၊နှမ်းဆီ၊ပင်စိမ်းသတ္တုရည်၊ဆီမီးတောက်မြစ်သတ္တုရည်ရော၍ဆီချက်ပါ။ထိုဆီကိုလိမ်းကျံပေးကလျှင်စွာပျောက်ကင်း၏။ သားဖွားလွယ်ဆေး ဆီမီးတောက်မြစ်ကိုကောင်းစွာဆေးကြော၍ကျောက်တွင်ရေနှင့်ကြိတ်ပါ။ထိုဆီမီးတောက်မြစ်မှုန့်ကိုချက်နှင့်ယောနိတို့၏အပေါ်တွင်လိမ်းကျံပေးခဲ့သော်သားသည်လျှင်မြန်စွာဖွားမြင်၏။ အချင်းကျဆေး သားဖွားပြီးနောက်အခြင်းမကျခဲ့သော်ကလေး၏ဦးခေါင်း၊လက်၊ခြေတို့၌လိမ်းကျံပေးလျှင်မြန်စွာအခြင်းကျ၏။ ကိုယ်ရောင် ခန္ဓာကိုယ်၏အပြင်ရှိတစုံတရာသောနေရာတွင်ရောင်ရမ်းခဲ့သော်ဤဆီမီးတောက်ကိုလိမ်းကျံပေးပါကပျောက်ကင်း၏။ … Read more